बुटवल- प्रदेश नम्बर ५का अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने जिल्ला सचिवमा घटुवा भएका छन् । सोमवार घोषणा भएको जिल्ला कमिटी अनुसार उनी सचिव पदमा घटुवा भएका हुन् ।
पार्टी एकीकरण नहुँदै उनी पार्टीको पोलिटव्यूरो सदस्य, केन्द्रीय सदस्य थिए । एकतापछि उनको नाम सचिवमा आएपछि न्यौपानेले आफूलाई सचिव पद स्वीकार्य नभएको घुमाउरो पारामा बताए ।
शुरूमा बधाई दिएका लोकान्तरकर्मी प्रकाश आचार्यसँग उनले भने, 'मलाई के को बधाई दिनुहुन्छ ? म डिमोसनमा परेकालाई, म घटुवा भएको मान्छेलाई ! तपाई आफैं भन्नुहोस् म पोलिटव्यूरो सदस्य भएको व्यक्ति केन्द्रीय सदस्य रुपन्देही इन्चार्ज भइसकेको हुँ । अहिले जिल्लाको सचिव मलाई सुहाउँछ ?’
यो विषयमा उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग कुरा गरिरहेको बताए । ‘यो विषयमा मैले अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुरा गरेको छु,' उनले भने, 'पूर्व माओवादीको जिल्ला सचिवमा सर्वसम्मत नाम सिफारिस भएका नारायण जिसी निर्मलको नाम सचिवमा हुनुपर्छ ।’
पार्टी गलत गरेको भन्दा पनि प्रक्रिया मिलाउँदा यस्तो भएको हुन सक्ने न्यौपानेले आशंका गरे । पार्टीले रुपन्देहीको अध्यक्ष बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिव सुवेदी र सचिवमा न्यौपानेको नाम सिफारिस गरेको छ । न्यौपाने रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ को 'ख'बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन ।